Kedu ihe a ga-eme site n'igbe ahụ?
Ọ dịtụla mgbe ị wetara nwa gị ihe egwuregwu ụmụaka na nnukwu igbe, n'ihi ya, ọ na - eji igbe na egwuregwu egwuri egwu n'akụkụ nkuku? Na mbụ, ụmụaka ga-ewu ụlọ ha, ugbu a, e nwere ụlọ obibi dị njikere. Na mbụ, anyị ga-emepụta onwe anyị egwuregwu, ugbu a, ihe niile dị njikere na-adọrọ mmasị na shelves nke ụlọ ahịa. Ọ bụ ya mere ajụjụ nke ihe nwere ike ime site na igbe maka ụmụaka, n'ihi na nne ma ọ bụ nna bụ ezigbo ọrụ. Ma n'eziokwu, e nwere ọtụtụ ihe ị ga-eche!
Kedu ihe a ga-eme site na igbe maka nwata ahụ?
Site na ụmụ nwoke, ihe niile dị mma ma na-akpali akpali n'otu oge. Ihe mbụ nwere ike ime site na igbe igbe maka obere ihe ọjọọ bụ njem. Na ebe a, ị nweghị oke njedebe!
Ọ bụrụ na ị dị oke oge ma ọ bụ karịsịa enweghị ngwaọrụ ọ bụla, gbanwee ya ma wedata ọkụ na ọnụ ụzọ. Ị mere ụgbọ ala! Ọ bụrụ na e nwere teepu scotch, isi na ụfọdụ oge n'efu, ị nwere ike ịmepụta rọketi, ụgbọ mmiri, ọbụna efere ohere!
Ọfọn, ọ bụrụ naanị na ịchọrọ iwepụ oge ma mee ihe pụrụ iche, ị nwere ike ịme ọkụ ọkụ, ụfọdụ na-ejikwa egwu maka obere ụgbọala. Ihe kachasị mfe ma ọ bụ ihe na-adighi adọrọ mmasị nke a pụrụ ime site na nnukwu igbe site na nnukwu ihe dị ka friji, ọ bụ naanị ohere maka creativity. O zuru ezu iji kwe ka nwatakịrị ahụ rịgoo ma nyekwuo pencil na akara. Jide n'aka, ọ ga-achọpụta ihe ị ga-eme! Ma ọ bara uru nke ukwuu na ọ ga-ekwe omume ịmepụta ihe maka nwa okoro ahụ, na-eche banyere ọganihu nke nkà na ụzụ nke ọma, ya bụ nnukwu lacing si n'akụkụ dị iche nke igbe.
Ọfọn, ma ọ bụrụ na ị nwere ezumike na ụmara nta chọrọ iyi uwe, ha nwere ike ịmepụta ya. Otu ụzọ ahụ site na obere igbe nwere ike ime uwe robot. Site n'ụzọ, ị nwere ike ime ya na nwatakịrị na naanị otu robot figure na uto nke nwa na-ekwe ka ya mma gị mgbalị.
Kedu ihe m nwere ike ime site na igbe kaadiboodu maka nwa agbọghọ?
Isi okwu nke enwere ike ime site na igbe maka nwa agbọghọ abụghị ihe na-adọrọ mmasị. N'ebe a, n'ezie, ụlọ ahụ na-echetara gị ihe niile! Na ebe a, ndị nne na nna nwere ike ịmepụta ihe mgbagwoju anya na agba mara mma.
E nwere ọbụna ntụziaka, mgbe kaadiboodu mere arịa na ihe ịchọ mma maka ụlọ ahụ. Kedu ihe na-egbochi gị ime obere ụlọ maka nwa agbọghọ si igbe ahụ, ya mere iji kwuo ebe ị zoro ezo? Ọ bụrụ na nwa ahụ na-ebute ụzọ ma chọọ ime ihe ndozi naanị ya, nke a ga-eme ka uru nke ihe mmụta dị otú a bawanye uru. Ma eleghị anya, nwa gị nwanyị chọrọ ezigbo ụlọ ahịa? A sị ka e kwuwe, anyị nwere onye agha na uwe agha cardboard! Site n'ụzọ, ọ nwekwara ike ịmepụta ebe nchekwa nchekwa.
Ọ dịghị mkpa ime nnukwu ụlọ na uto mmadụ. Maka ụmụ nwanyị toworo eto, ọ na-adọrọ mmasị igwu ụlọ ụlọ bebi. Ma, ebe a abụghị naanị ihe ọbụla. Ị nwere ike iji ụlọ akwụkwọ gụkọta ụlọ maka ịchọta onyinye ma ọ bụ chọpụta foduru nke akwụkwọ ahụaja mgbe emechara ya. Ma ọ bụrụ na ụlọ ahụ ga-enwe ọtụtụ ala, nwa gị ga-ekele gị n'ezie!
Ihe ọzọ a na-adịghị ahụkebe nke nwere ike ime n'ime igbe bụ kichin ma ọ bụ stovu. N'ebe a, ị na-eji obi ike eburu akwụkwọ gluu na akwụkwọ acha, yana ọtụtụ textiles ma ọ bụ ihe osise. Na ị na-amalite ike ịmepụta ihe pụrụ iche! Site n'enyemaka nke mpempe akwụkwọ na agba agba, ị nwere ike ime ka ihe ọ bụla kichin kichin, ụfọdụ ndị na-eji otu ụzọ ahụ tinye igbe n'ime igwe ọkụ na efere efere. Na nkenke, ị nwere ike ime ka obere ngwa ngwa na nnukwu ngwa ngwa nke ụlọ dị iche iche na nha. E nwere ọtụtụ echiche na ọ dị mkpa ka ị nye nwa ahụ igbe ahụ n'onwe ya, ọ ga-eduzi ma kọọrọ gị ihe ị ga - emeli. Mgbe ahụ, ha na ụmụaka nwere echiche nke anụ ọhịa ha!
Topiary - nnabata klas
Kanzashi maka mmalite
Sakura si na klas mara mma
Fir-osisi na macaroni
Onu ogugu eji aka aka
Esi mee ka uwe ahụ dịkwuo ogologo?
Ogugu nke obi
Bouquet si chupa-chups nwere aka
Otu esi eji aka gi mee akwukwo nkita - akwukwo uzo ozo
Kedu otu esi ehicha ihe ntanye na ngwongwo na-agbanwe?
Obi nke obi
Ihe eji eji aka aka
Akpụkpọ anụ akpụkpọ ụkwụ aka ya
Kedu esi gwọọ oyi n'ụbọchị 1?
Kedu esi etinye ntụ ntụ ahụ?
Kedu ihe na-atọ ụtọ iji esi nri buckwheat?
Kedu otu esi ewusi ntutu site na ọnwụ?
Kedu otu esi emeso onye di na nwunye omume?
Osisi mmiri na - agba - ezigbo na ihe ọjọọ
Ngwakọta ọka oporo na-egbuke egbuke na eyịm
Oke nke placenta
Ole mmadụ ole na ole Djungarian na-agba?
Uwe mgbede mara mma
Ịkwadebe mmanya n'ime ụlọ
Ogo na ibu nke Nina Dobrev
Nri na-enweghị nnu
Kashi Nestle - nhazi
Nkpuchi ihu na akwa
Nepal - ntụrụndụ
34 izu ime ime - gini na - eme?
Obere oge na-arụ ọrụ
N'ajụjụ ọnụ mbụ nke Prince Harry na nwunye ya bụ Megan Markle
Ọrịa nke pigs